Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 07/08/2020)
tareenada Swiss yihiin kuwa ugu fiican Europe sida ay Boston Consulting Group. First of dhan, Swiss ku gaari ratings sare inkastoo ay hoos u tayo. Swiss ayaa gaari a 7.2 guud rating baxay 10. halka Denmark, Finland, iyo Germany oo dhan gaari a 6+ rating. Mida ratings ah, it is especially relevant to mention that Bulgaria achieved a low rating of 1.9. Switzerland gaari ay rating sare, sababtoo ah waxaa u dhaliyay marks buuxa oo ku saabsan xoojinta isticmaalka.
In addition to achieving high ratings, Swiss trains are also considered to be good value for money. ratings index waa sida soo socota;
marka hore, waxaa jira dhowr arrimood oo ka dhigi tareen Swiss socdaal ugu fiican Yurub. Ma aha oo kaliya tareenada Swiss siiyaan isku halaynta ugu fiican iyo waqtigana in Europe laakiin sidoo kale ay arkaa in ay yihiin mid aad u ammaan ah with good quality service. The Swiss are the most frequent train travelers in Europe with over 10,000 tareenada maalin walba socda ee ku saabsan 3000 network rail km. Shabakadda rail Swiss leedahay isticmaalka ugu sareeya awoodda in Europe.
Waxaa jirta sabab ah sababta tareenada Swiss ayaa kaalinta tirada 1 tan 2012. Dalalka la shabakadaha tareenka yar (under 6,000 km) kulligiin waad aragteen ratings ay sii kordhaba lagu guda jiro waqti this. This includes Switzerland, Denmark, Finland, Norway, Holland, iyo Luxembourg. dal waxay bixiyaan waqtiga sare, high-speed rail percentage and offer a lower cost per km for their service. Equally important, kuwaas oo tareen dalalka shilal yar iyo dhimashada oo hagaajinaysaa ay guud ahaan score ammaanka.
Waxaa jira dalal badan oo qurux badan si ay u booqdaan ee Switzerland inkastoo ay size yar yar. The alps and glaciers are the main attraction but travelers also enjoy the ancient Daar wayn, cad harooyinka sumurud, and bucolic countryside. waqti kasta oo sanadka aad ku raaxaysan karaan tug, kobaha barafka, ciidaha iyo mahrajaano ee Switzerland. Intaa waxaa dheer, waxaa jira heerka dambi aad u yar a in Switzerland kaas oo meel ammaan ah u safraya dhigi. The must-see places in Switzerland include Matterhorn, Zermatt taas oo buurta dunida ugu sawiro ah. Sidoo kale, Chateau de Chillon, Montreux waa waa-arkaan dalxiisayaasha. Tani qalcaddayda biyo qadiimiga ah oo ka kooban 25 dhismayaasha iyo saddex ardaagooda waa mid ka mid ah dhismayaasha taariikhiga ah ugu soo booqday dunida oo dhan.
Gebogebadii, ay jiraan sababo badan oo ay ku socdaalaan tareenka a Swiss. tareenada ee Switzerland malaha waa ugu tareenada qurux badan in Europe. If you are looking for a romantic holiday or buundooyinka breathtaking, Switzerland waa meesha si ay u tagaan. qaado 3 daqiiqo hadda inay jartaan tikidhka tareenka a Swiss on our fududahay in la isticmaalo goobta tareenka. Tigidhada laga gadan karaa iyadoo la isticmaalayo kaararka deynta, iyo lacagta badan ka duwan.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/swiss-trains-ranked-best-europe/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)